Anyị na-enyocha HS's iSteady Mobile + Gimbal, ihe ejiji ejiji | Akụkọ akụrụngwa
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Ngwa, Ngwa, Nyocha
N'oge a anyị na-ekwu maka ya otu n'ime Ngwa ndị na-aga nke ọma n'oge na-adịbeghị anya. Karịsịa n'etiti ndị kasị eji ọrụ nke foto na vidiyo. Taa, anyị na-agwa gị okwu na Ngwa Ngwa gbasara ngwa nke ga - eme foto gị, ọkachasị vidiyo gị bulie oke na ọkwa, anyị anwalela na Hohem iSteady Movile + Gimbal.
Anyị hụrụ n'anya ịnwale ngwa na ngwa na-agbakwunye ekwentị anyị. N'ihi nke a, mgbe ihe dị otu ahụ na-atọ anyị ụtọ ịbata n'aka anyị, ọ bụ ihe ọ toụ ịkọrọ gị otu ọ dị ma ọ bụ otu o si arụ ọrụ. N’ezie, gwa gị ihe kacha amasị anyị na ihe kachasị amasị anyị. N'oge a n'aka Hohem, anyị enweela ike ịchọpụta etu ọ dị mfe iji na ihe nwere ike melite video. Ọ bụrụ na ọ bụ ngwa ị na-achọ, zụta ebe a Hohem Gimbal iSteady Mobile + na Amazon
1 Anyị na-akọwa ihe Gimbal bụ
3 Nke a bụ Gimbal Hohem iSteady Mobile +
4 Uzo ato nke na-enye ihe ruru 320º nke agagharị
5 Omenala ngwa emere maka ngwa anyị
6 Ihe na ego nke Hohem gimbal
Anyị na-akọwa ihe Gimbal bụ
Ọ bụrụ na ịmaghị ihe anyị na-ekwu. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe ọhụụ na mpaghara ahụ O nwere ike ịbụ na ị hụbeghị otu n'ime ndị a. Ngwaọrụ eji ọtụtụ afọ na ụlọ ọrụ ihe nkiri na ụlọ ọrụ telivishọn ugbu a ọ na-abịa na ekwentị anyị. Ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na ị maghị ngwa na ngwa niile. Ọbụna O nwere ike ịdị gị ka ị na-elele foto ndị anyị na-enye osisi selfieEchegbula, anyị ga-enwe obi ụtọ ịkọwara gị ya.
Ka anyị niile wee mara nke ọma ihe anyị na-ekwu maka nyocha a, anyị ga-ebu ụzọ gwa gị gịnị bụ "ite" a, gịnịkwa bụ maka ya?. Gimbal bụ ụdị motorized n'elu ikpo okwu na-achịkwa, n'okwu a, ekele otu mbadamba nwere ọtụtụ ihe mmetụta. Ọ na-enwekarị accelerometers na magnetik compass. Ihe ha nwetara, na-eji a ọkaibe mmemme algorithmic, ọ bụ jigide nkwụsi ike nke onyonyo nke igwefoto were oge niile.
Ọ bụ ọ bụ ezie na gimbal nke anyị ji igwefoto ma ọ bụ ekwentị kpalie, gbaa ma ọ bụ captures ga-adịgide adịgides n'oge niile. Hohem gimbal nke anyi nwere ike nwalee nwere anyụike atọ. Ọ bụ ezie na ọ dịkwa ebe niile, anyị na-ahụ naanị abụọ. Ngwa eji ogologo oge maka ndekọ ọkwa ọkachamara.
Na gimbal na aka gị Anyị agakwaghị enwe vidiyo na mkpọtụ ma ọ bụ mmegharị na mberede. Vidio ndị anyị weghaara na-enye nkwụsi ike na-anabata nke ọma ọbụlagodi mgbe onye na-ejide gimbal na-agagharị. Dị ka anyị na-ahụ, a na-akpali nnọọ mmasị ngwa na-esiwanye ike na Smartphone ụwa, o yikwara ka ọ na-abịa ịnọ.
Gimbal nke Hohem iSteady Movile + abịa na-eji atọ axles na-enye ruo 320º uzo, accelerometers, magnetik kọmpas. Ngwaahịa e mere nke mere Nguzosi ike onyonyo na vidio anyị dịkwa maka onye ọ bụla. Ọ bụrụla ezigbo ahụmịhe iji gimbal a wee hụ otu ekele maka ụdị ngwa a anyị nwere ike nweta nsonaazụ ọkwa site na iji ekwentị anyị na-edekọ.
Hohem Gimbal iSteady Mobile + dị ugbu a na Amazon
Oge eruola ka anyị hụ ihe anyị hụrụ n'ime igbe. Dị ka anyị maara, e nwere unboxings ndị ọzọ bụ ihe mara mma karịa ndị ọzọ. Mgbe anyị zụrụ ngwa ngwa, anyị anaghị atụ anya ịchọta ihe ịtụnanya ọ bụla. Ya mere, n'ime igbe nke Hohem Gimbal iSteady Ekwentị +, anyị chọtara kpọmkwem nke ahụ.
Ke adianade do, dị ka na-atụ anya na anyị nwere chaja nja batrị na ntinye Micro USB. Dị ka mgbakwunye anyị nwere obere ngwa maka Gimbal n'onwe ya. Obere ụkwụ foldable na ịghasa super mfe na isi nke guzoro. Soro ha anyị nwere ike iji gimbal dị ka njem. Nkọwapụta nke na-abawanye ngwa ngwa nke gadget.
Nke a bụ Gimbal Hohem iSteady Mobile +
Ikwu okwu banyere nhazi nke ngwaọrụ nke ụdị a bụ ntakịrị ihe mgbagwoju anya. Karịsịa n'ihi na anyị nọ n'ihu ngwa nke ihe dị mkpa jiri rụọ ọrụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100%. Ya mere, na mgbakwunye na ịkọwapụta ngwa ahụ, anyị nwere ike ịgwa gị gbasara ihe eji arụ ụlọ. Bụ nke ejiri plastic na-eguzogide ọgwụ siri ike, na a obi ụtọ na-emetụ ma na-enye a ezigbo mma. Dị ka onye nrụpụta si kwuo, ihe ya ga-ejidesi ike iji ogologo oge ma ọbụ tụlee enweghị isi.
Ọdịdị ya, dịka anyị kwurula na mbido, yitere nke osisi selfie, n’agbanyeghi na ọrụ ya na-aga n’ihu. Ọ nwere akụkụ nke nwere njide iji jide n'aka na a ergonomic jidere nke ahụ na-eme ka njide siri ike. Anyị nwere ike ijikwa igwefoto na nhọrọ ya niile site na iji mkpịsị aka aka na mkpịsị aka.
Na mpaghara ihu ekpe iji mkpịsị aka ukwu anyị na-achọta a ahụigodo na otutu nhọrọ. Na mgbakwunye na bọtịnụ on / gbanyụọma ọ bụ, obere "mgba ọkụ" nke anyị nwere ike ịhọrọ n'etiti foto ma ọ bụ vidiyo. Anyị nwere ọystụ nke a ga - eji na - achịkwa gimbal ya na ya igwefoto.
Na azụ nke ebe a na-ejide ya, anyị na-ahụ a bọtịnụ triga. Anyị nwere ike iji ya "Gbaa" foto, ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị ejiri ọnọdụ vidiyo, malite ma ọ bụ kwụsịtụ ndekọ. Ọnọdụ na-eme jiri naanị mkpịsị aka abụọs, ndeksi na isi aka, anyị nwere ike ịnwe njikwa zuru oke gadget na igwefoto n'onwe ya. Y ị nwere ike nweta ya na Amazon maka ihe na-erughị ka ị chere
Uzo ato nke na-enye ihe ruru 320º nke agagharị
N'elu elu, n'elu "aka", Hohem gimbal na-egosipụta anyụike atọ nke ngagharịma ọ bụ. Daalụ ezigbo de nhazi usoro algorithm, arụmọrụ ya dị mma. Thedị ire ụtọ nke ha na-arụ ọrụ oge niile ka ihe oyiyi na smartphone dị mma mgbe niile kwesịrị ịhụ. Nhazi na ịkpụzi ihe na-eme ka onye ọrụ nwee ahụmịhe.
Na mpaghara nke ka elu anyị na-ahụ "nkwekọ" ebe anyị ga-edebe ekwentị ma ọ bụ igwefoto nke foto ma ọ bụ vidiyo. Jiri otu gụọ ime ya na ihe dị nro iji kpuchido ama anyị. Meghe ya ga - etinye ngwaọrụ na nrụgide na ndekọ ndị ahụ ga - adịgide adịgide. Dabere na nha gadget nke anyị "jikọtara" anyị nwere ike ịgbatị anyụike nke mere na ọ dịghị ntụgharị ntụgharị ga-efu.
N'ihi okpukpu atọ ya, Hohem's iSteady Mobile + gimbal zuru oke na-akwụ ụgwọ ruo 320º tilt or turn. Anyị nwere ike ịmegharị ma megharịa gimbal ahụ, mana ndekọ na-aga n'ihu n'ọnọdụ kachasị mma. Ogologo oge a ruru 320º. Nwere ike iji okirikiri dị n’aka gị mee okirikiri n’akụkụ ebe igwefoto dị adịghị agagharị.
Na mgbakwunye, na ekele nye ọystụ anyị nwere 360 Celsius pan n'akụkụ. Dị ka anyị pụrụ ịhụ, e nwere ole na ole ohere na a gadget na-enye anyị. E nwekwara ọtụtụ mmụba anyị nwere ike inweta na vidiyo na foto. Ọ bụrụ na ị maghị, ịkwesighi imefu ego iji nweta ya. Lee ị nwere ike ịzụta Hohem Gimbal iSteady Mobile + na Amazon na ọnụahịa kachasị mma.
Omenala ngwa emere maka ngwa anyị
Inwe ngwa nke aka gị emere maka ngwaọrụ anyị ji eme ihe bụ agbakwunyere mgbakwunye. Ahụmịhe onye ọrụ ahụ ezughi oke mgbe anyị ji ngwa ndị ọzọ mepụtara maka ngwaọrụ. Ya mere, na-eji ngwa ahụ, anyị nwere ike ịnweta nhọrọ niile dị na Hohem iSteady Mobile + nwere.
Site na ngwa a zuru oke anyị nwere ike ijikọ ngwaọrụ anyị n'ụzọ kachasị ọsọ ma dị mfe. Na Bluetooth rụọ ọrụ, ngwa ahụ n'onwe ya bụ ọrụ maka ijikọ gimbal na ekwentị. Ozugbo emere nke a, igwefoto nke Smartphone gị, yana karịa ihe niile gị videos ga-adị otu ọzọ.
Ọ bụrụ na foto bụ ihe dị mkpa maka gị ma ịchọrọ ị nweta ihe ọzọ na igwefoto Smartphone gị, echekwala ọzọ. Anyị nwere ike ịdụ gị ọdụ Ngwa a na-achọsi ike na nke na-arụ ọrụ, nke ji nwayọọ nwayọọ na-ewu ewu. Obi abụọ adịghị ya, onye anyị nwere obi ụtọ ịnwale, Hohem iSteady Mobile +, ga-akarị ihe ị tụrụ anya ya.
Ihe na ego nke Hohem gimbal
Ọ dịkarịrị mfe iji karịa ka ọ nwere ike iyi mgbe ị hụrụ ya na nke izizi na arụ ọrụ.
Atụmatụ a omenala padded zippered ebu akpa. Ma ọ bụghị ya, ọ ga-abụ ihe siri ike ngwa ịkwaga.
Wuru nke ihe na-enye obi ụtọ na aka, na-enye ezigbo njide ma na-eguzogide ọgwụ.
Nha ya na-eme ka ọ ghara ịbụ ngwa iji na-eburu gị kwa ụbọchị ma ọ bụ n'okporo ụzọ.
Enwere ike ịghọta ojiji ya na vidiyo na-akpụ akpụ n'agbanyeghị na anyị nwere ike inye ya ọtụtụ iche iche.
Obi erughị ala na-ebu
Hohem gimbal Kwụsie ike Mobile +
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Hohem iSteady Mobile + Gimbal Nyochaa